Firefox 7 rutere, na arụmọrụ kacha mma | Site na Linux
Firefox 7 dị ebe a, yana arụmọrụ kacha mma
Mozilla na-eme ka ndị ọrụ ya nweta a mbipute ọhụrụ nke Firefoxmaka sistemu desktọọpụ na ngwaọrụ mkpanaka. Ka anyị lee mgbanwe site na ụdị a.
Izu iri na abụọ gara aga, ọtụtụ blọọgụ teknụzụ kwughachiri ọkwa: Mozilla ga-ebelata nchekwa nchekwa Firefox. A malitere ịchọta nke a na nsụgharị ikpe, nke ụfọdụ nwere ike iru 30% na-erughị Ihe nchekwa RAM karịa nsụgharị gọọmentị n'oge ahụ. Mgbanwe ndị a mechara ruo n'ụdị anụ ahụ, nke anyị nwere ike ịchọpụta mbelata nke nchekwa a na ihe nchọgharị ahụ.
E wezụga mkparịta ụka banyere ma ọ na-eri ihe ọzọ ma ọ bụ na-erughị ihe nchọgharị ndị ọzọ, ọ dị mma mgbe niile na oriri na-agbada. Si banyere: na ihuenyo ncheta anyị pụrụ ịhụ ihe zuru ezu akụkọ nke ebe nchekwa oriri na onye ọ bụla na taabụ na-enwe.
1 Mmekọrịta ozugbo
3 Mmezi Windows
4 Firefox Ekwentị
Otu n'ime nsogbu bụ isi nke Sync dị ka ọrụ nwere bụ na mgbe agbanyere ya na-enweghị onye ọrụ ahụ, nke a mepụtara obi abụọ banyere ọnọdụ nke otu tupu ịhapụ kọmputa.
Dị ka ebumnuche bụ na mmekọrịta a abụghị ihe onye ọrụ ga-echeta, e kpebiri ịmekọrịta ụfọdụ atụmatụ karịa oge ma debe oge ndị ọzọ ugbu a.
Dịka ọmụmaatụ, ibe edokọbara na okwuntughe na-arụkọ ọrụ n'otu ntabi anya ka anyị wee ghara inwe ihe ize ndụ nke ịhapụ kọmputa tupu ịmekọrịta ma ọ bụ na anyị ga-echere ka ngwaọrụ mkpanaka mekọrịta iji hụ ntụziaka ebe anyị kwesịrị ịga.
Oge izizi anyị jiri ụdị a, Firefox ga-ajụ anyị ma anyị chọrọ isonye na Telemetry, sistemu jikọtara n'ime ihe nchọgharị ahụ na-eziga ozi arụmọrụ na-enweghị aha na Mozilla, na-enweghị ike ịchọpụta kedu kọmputa e zigara ya. Knowmatakwu banyere ebumnuche mmemme a na otu o si arụ ọrụ, ị nwere ike ịgụ Akụkọ a (na Bekee).
Azure bụ usoro na - eme ka Firefox rụọ ọrụ nke ọma site na Direct2D na mkpado canvas. N'ụzọ dị otú a, arụmọrụ nke usoro ndị emepụtara n'ime mkpado a ka mma.
Na mgbakwunye, etu esi gosipụta mkpụrụ edemede ka mma, iji GDI maka obere nha karịa API ọhụrụ maka mkpụrụ edemede.
Ahụmịhe oge izizi mmemme a ka emelitere, ya na nkọwapụta dị mma yana ohere ịhọrọ asụsụ ahụ. N'oge a, a na-eji usoro ihe omume ahụ ebudata asụsụ niile, mana echiche maka nsụgharị n'ọdịnihu bụ na ebudatara asụsụ ahụ na nke mbụ ọ na-agba ọsọ, mgbe ịchọpụtara asụsụ nke ngwaọrụ ahụ.
Site na mbipute gara aga, esere ihe oyiyi na ogo dị elu na ngwaọrụ nwere NEON processors. Site na ụdị a, arụpụtara otu ọrụ na ngwaọrụ ndị na-eji ndị ọrụ ndị ọzọ, dị ka Tegra.
Na mgbakwunye, agbakwunyela ndị nchịkọta nhọrọ ederede gam akporo, nke na-enyere Firefox aka ịkwado nke ọma na sistemụ arụmọrụ ebe ọ na-agba ọsọ.
sudo tinye-apt-repository ppa: mozillateam / firefox-stable
sudo apt-nweta mmelite
sudo apt-nweta itinye firefox
I nwekwara ike ibudata ya na ebe a ma ọ bụ gaa Enyemaka-> Banyere ma ị ga-ahụ nhọrọ iji melite.
Fuentes: Asụsụ Hispanic Mozilla
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Firefox 7 dị ebe a, yana arụmọrụ kacha mma
Orlando Garzon Diaz dijo
Eärendi daalụ maka ịchịkọta ndozi ndị a na Firefox. Ọ bụ ezie na ọ bụ mmụba na nsụgharị anụ ma ha dị mma, ọ masịrị m ịnwale ya n'ụlọ karịa n'ọfịs ebe ọ dị oke mkpa maka ọrụ m.
Zaghachi Orlando Garzón Díaz
Ma ọ dịkarịa ala ụdị nke ubuntu 11.04 (nke na-azọrọ na ọ bụ 7.0.1) nchekwa nchekwa ahụ anaghị ahụ anya, ị ga-ahụ ụdị ebudatara ozugbo na mozilla
A na-ahụta mmelite ahụ ọkachasị mgbe ị na-emepe ọtụtụ taabụ.
Na 03/10/2011 20:38, «Disqus» <>
Mepụta aha na GNU / Linux
Fennec: ihe nchọgharị ekwentị nke Mozilla